- पुरातात्विक स्वरुप नबिग्रने गरी रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ: भेषनारायण दाहाल (भिडियो सहित)
पुरातात्विक स्वरुप नबिग्रने गरी रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ: भेषनारायण दाहाल (भिडियो सहित)
रानीपोखरी काठमाडौंको धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको सम्पदा हो । भूकम्पले क्षतिग्रस्त अवस्थामा पुरयाएको रानीपोखरी, त्यसको वरिपरि रहेका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका संरचना, पोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्दा काठमाडौं महानगरले परम्परागत सामग्री प्रयोग गरेर पहिलेकै स्वरुपमा नराखी नयाँ स्वरुपमा लैजान खोज्यो । महानगरले बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माणमा जथाभावी कंक्रिटको प्रयोग गरयो । आमनागरिकको विरोधपछि पुरातत्वले त्यो कार्य रोकेको छ । मन्दिर तथा पोखरीमा ठूलो धनराशि खर्च गरेर बनाइएका कंक्रिट संरचना अहिले हटाइँदै छ ।
। अब मन्दिर पुरातत्वले परम्परागत सामग्री प्रयोग गरेर निर्माण गर्ने बताएको छ ।
महानगरले अझै पनि रानीपोखरीलाई आधुनिक स्वरुपमै लगी त्यसलाई व्यावसायिक रुपमा प्रयोग गर्न चाहेको बताएको छ । पुरातत्वले भने रानीपोखरी, बीचमा रहेको बालगोपालेश्वरको मन्दिर, रानीपोखरी वरिपरिका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका संरचना निर्माण गर्दा परम्परागत सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने, पोखरीको परम्परागत स्वरुप नबिग्रने गरी केही आधुनिक साजसज्जा गर्न त सकिन्छ तर तिनको ऐतिहासिकता र पुरातात्विक स्वरुप बिग्रन नहुने बताएको छ । यसै विषयमा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालसँग नेपाल ताराका आशिष पौडेलले गरेको कुराकानी :
भूकम्प जानुभन्दा अगाडि पुरातत्व विभागले रानीपोखरी संरक्षण गर्न के कस्ता काम गरेको थियो ? भूकम्पले रानिपोखारीलाई क्षति पुराइसकेपछि के काम गरिरहेको छ ? यस विषयमा बताइदिनुहोस् न ।
पुरातत्व विभागले भूकम्प जानुभन्दा अगाडि खासै केही काम गर्नुपरेको थिएन। रानीपोखरीभित्रको बालगोपालेश्वोर मन्दिर र पोखरी सुरक्षित थियो । भूकम्पले देशभरिका धेरै सम्पदाहरुको क्षति पुरयायो । रानीपोखरीभित्रको बालगोपालेश्वर मन्दिर पनि क्षतिग्रस्त हुन पुग्यो। त्यसै सिलसिलामा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट ठूलो प्याकेजमा नक्साहरु आए । ती नक्साहरुमा पुरातात्विक मापदण्ड पूरा नगरिएको हुनाले पुरातत्व विभागले मापदण्ड अनुसार महानगरपालिकालाई सच्याउनका लागि अनुरोध गर्यो। महानगरपालिकाले सच्याएर त्यसको स्वीकृतिको काम पूरा नहुँदै रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्यो र आफ्नो काम सुरु पनि गर्यो। काम गर्दै जाने क्रममा महानगरपालिकाले बालगोपालेश्वर मन्दिरलाई आरसीसी पिल्लर लगाएर उठाउन सुरु गरयो । पुरातात्विक मापडण्ड पूरा गरेको नपाइएपछि त्यसलाई हामीले रोकिदियौं, पिल्लर काट्यौं। तत्कालीन अवस्थामा पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हामीकहाँ बजेट नआइसकेको अवस्था थियो । त्यसपछि प्राधिकणबाट बजेट ल्याएर पुरातत्व विभागले मन्दिरको काम सुरु गर्यो भने रानीपोखरीको प्याकेजको कामचाहिं महानगरपालिकाले सुरु गर्यो। त्यस समयमा स्थानीय प्रतिनिधिहरु आइसकेको अवस्था थिएन चुनाब भइसकेपछि उहाँहरु आउनुभयो । एउटा विज्ञ समूह राखेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु उठ्यो । त्यसै क्रममा माधको १३ गते मन्त्रिपरिषद्ले पुरातत्व विभागको स्वीकृतिबिना रानीपोखरी निर्माण नहुने निर्णय गर्यो । त्यसपछि हामीले पत्र काट्यौं । त्यसपछि रानीपोखरीको मन्दिरको काम रोकियो र पुरातत्व विभागबाहेक अरुलाई कारबाही गरियोस् भनेर सार्वजनिक रुपबाट कुनै व्यक्तिविशेषले अदालतमा मुद्दा हाले । त्यसपछि हामीलाई अदालतले रानीपोखरीको काम रोक्नु पर्दैन भन्ने आदेश दिएपछि यसलाई हामीले निरन्तरता दियौं।
काठमाडौं महानगरपालिकाले रानीपोखरी निर्माण गर्ने क्रममा पुरातात्विक महत्व लत्याएर काम गरिरहँदा पुरातत्व विभाग मौन बसेको अवस्था थियो । उसले काम गरिसकेपछि जब नागरिकले विरोध गरे त्यसपछि मात्र यो काम पुरातत्वले अगाडि बढाएको अवस्था होइन र ?
मौन बसेकै छैन, होइन । महानगरपालिका जस्तो जिम्मेवार संस्था, व्यक्तिविशेष होइन, कसैले मैले ऐन कानुन जानिन भनेको अवस्थामा व्यक्ति भएको खण्डमा हामीले कारबाही गर्ने कुरा आउँछ तर संस्था आफै जिम्मेबार हुन्छ । महानगरपालिका आफैमा जिम्मेवार तह हो । उसको जिम्मेवारीभित्र सम्पदाको संरक्षण गर्ने, सम्बर्धन गर्ने कुरा हुँदाहुँदै पुरातत्व विभागले पत्र लेखेन, मौन बस्यो भन्ने कुरामा म विस्वास गर्दिनँ। हामीले पत्राचार धेरै गरेका छौं। महानगरबाट पत्र नबुझिदिने, अटेरी गर्ने काम भयो । असमझदारी जस्तो अवस्थाको सिर्जना भयो। यस्तो अवस्थामा हामीसँग प्रहरी छैन तर पनि हामीले प्रहरीलाई समेत अनुरोध गरेका छौं । अब जे भए पनि बितेका कुरालाई सच्याएर माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कंक्रिट भत्काएर पुनः बनाउने भनिसकेपछि महानगरपालिकाले सुरुवात गरेको छ। हामीले महानगरपालिकालाई नक्सा दिएका छौं ।
अहिले पुरातत्व र महानगरपालिकाबीच त्यस्तो असमझदारी छैन । सिलसिलाबद्ध रुपमा काम अगाडि बढेकोको अवस्था छ । अझै पनि महानगरपालिका कुनै किसिमको दोधारमा छ भने बसेर समाधान गर्न हामी तयार भइसकेका छौं। अबको अवस्थामा चाहिं मिडियाकर्मी साथीहरुले यस विषयलाई सकारात्मक रुपमा हेरिदिनुभए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलार्इ लाग्छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले दिएको जानकारी अनुसार पुरातत्व विभागले मन्दिर बनाउँछ महानगरपालिकाले पोखरी र वरिपरिको भाग निर्माण गर्छ । निर्माणपछि रानीपोखरीमा म्युजिकल फाउन्टेनका साथै अन्य संरचनालाई आधुनिक रुपमा अघि बढाउने भन्ने छ। यस्तो अवस्थामा पुरातात्विक हिसाबले कुनै असर पर्दैन र ?
एउटा कुरा यहाँलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सार्क सम्मेलन भएको बेलामा सभागृहमा फाउन्टेन चलाइएको थियो । अब रानीपोखरीमा पनि गर्न लागेको यो कुरा नयाँ होइन दिउँसो नचलाएर राति मात्र चलाउँदा यसले पोखरीको सौन्दर्य अझ बढाउँछ । यसले पुरातात्विक हिसाबले रानीपोखरीलाई असर पार्छ जस्तो लाग्दैन । रानीपोखरीको पुरातात्विक महत्वलाई मान्नुपर्दा परम्परागत निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर पहिलेको जस्तै पानी जम्ने हिसाबको बनाउने हो । यसको धार्मिक,सांस्कृतिक र सामाजिक महत्व राखिराख्नका लागि परम्परागत हिसाबबाट निर्माण गर्नुपर्ने मन्दिर र पोखरी नै हो। म्युजिकल फाउन्टेन निर्माण गर्दा कुनै कुराको असर पर्ने जस्तो देखिएको अवस्थामा हामी छलफलको माध्यमबाट अगाडि जान सक्छौं । यदि त्निर्माण गर्ने क्रममा त्यहाँको स्वरुप घट्न गयो या परम्परागत सामग्रीको प्रयोग भएन भने यसको महत्वमा फरक पर्न पनि सक्छ ।
रानीपोखरीको पानी अहिले सुकेको अवस्थामा छ, आकाशबाट परेको पानीसमेत अडिएको देखिएको छैन, महानगरपालिकाले भने परम्परागत मूल रहेको र त्यो पत्ता लगाउने क्रममा छौं भनेको छ, परम्परागत मूलको अवस्था के छ ? पोखरीमा कसरी पानी अडिनसक्ने बनाइन्छ ?
अहिले हामीले त्यहाँको पानीको ट्रायलको रुपमा मात्रा जाँच गर्ने क्रममा डेढदेखि दुर्इ फिट तलसम्म पानी रहेको भेटाएका छौं । यसको एउटा प्रविधि छ । त्यसलाई प्रयोग गरेर हामी पानी अडिने किसिमको बनाउन सक्छौं । तपार्इं–हामीले थाहा पाए अनुसार भोटाहिटीतिरबाट पानीको मुहान छ । महानरपालिका मूल पत्ता लगाउने क्रममा छ भने त्यो एकदम राम्रो कुरा हो । रानीपोखरी निर्माण महानगरपालिकाले आफैले गर्न लागेको काम हो । हामीले बाहिरबाट जानेको विज्ञता सहयोग गर्ने हो। हामीसँग उहाँहरुले एजेन्डा अनुरुप सल्लाह लिन आउँदा हामीले कन्जुस्याइँ नगरिकन जानेको सीप सबै प्रयोग गर्छौं । मूलको खोजी गर्ने कुरा राम्रो हो, त्यसका लागि यहाँबाट उत्खननका साथीहरुलाई पठाउनेछौं । पानीलाई परम्परागत हिसाबबाट नै अडाउनुपर्छ। यदि विज्ञहरुले रानीपोखरीको पानी अडाउनका लागि आधुनिक प्रविधि नै उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा हामीले सबैभन्दा कम मात्रामा आधिुनिक सामग्री प्रयोग गर्न पनि सक्छौं ।